Ịwụ ịwụ & ndị na-emepụta oche na ndị na-ebunye ihe - China Ịkụ azụ azụ & Ụlọ ọrụ oche
Ịkụ azụ nke EVA mpịachi ịwụ
Azụ EVA mpịachi akpa, mere nke 1mm thickened EVA maka n'èzí na n'ime, net cover imewe, ihe integrated udi, 6 mita ogologo eriri, 1.2mm thickened ala ọzọ siri ike iji, onye ọ bụla ibu ibu bụ 348-425g dabere na dị iche iche ike.
Ihe No.LSA 2001
Nha:S, ML, nha atọ dabere na mkpa ịhọrọ.
Ihe:1mm ọkpụrụkpụ erughi EVA
Agba:BK, Blue, Red na Grey ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịkụ azụ n'èzí Eva mpịachi ịwụ
Ibe mpịachi EVA, aka ahụ bụ eriri siri ike ma dị fechaa iji buru ya, enwere atụmatụ abụọ, otu nwere ntupu n'elu, nke ọzọ enweghị ntupu.Ihe EVA gbara ọkpụrụkpụ wulitere, nke na-agaghị eyi ma na-adịgide adịgide.
Ihe No.LSA 2002
Nha:7.8L * 7.8W * 7.5H inch
Ihe:EVA gbara ọkpụrụkpụ
Agba:Blue, Red, Grey, BK ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịkụ azụ n'èzí Eva Bucket
Ịkụ azụ EVA ịwụ, nke ihe EVA gbara ọkpụrụkpụ wuru, na-eyi na-eguzogide ma na-adịgide adịgide, usoro 5 dị maka nhọrọ ịhọrọ oge ọ bụla, na-eji rọba dị mma iji buru ya, na oghere mgbapụta oxygenation nwere ike izipu oxgen ka ọ bụrụ azụ n'oge ọ bụla, dị mfe ihicha, dị arọ iji wepụ. n'èzí.
Ihe No.LSA 2003
Nha:nha 6 dị - 12L, 21L, 28L, 35L, 50L
Ihe:EVA gbara ọkpụrụkpụ 1mm
Agba:BK, Blue, Grey ma ọ bụ dị ka ahaziri
Ịwụ ịkụ azụ EVA arụrụ n'èzí
Ịwụ ịkụ azụ, imewe siri ike, nke 0.10mm ọkpụrụkpụ EVA mere, nke na-adịgide adịgide na mmiri na-adịghị, na otu eriri ubu iji were n'ubu, zippers ụzọ abụọ nke dabara adaba imeghe ma ọ bụ mechie, dị fechaa ibu n'èzí.
Ihe No.LSA 2004
Nha:5 nha dị, 12L, 21L, 28L, 35L na 50L
Ihe:EVA gbara ọkpụrụkpụ 0.1 mm ọkpụrụkpụ
Agba:BK, Grey, Blue, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Oche bed ezumike nka azụ
Ihe ndina ntụrụndụ na-akụ azụ, ihe dị nro na nke mara mma, akwa 600D oxford n'ime padded na sponge padding na-adaba adaba na-edina ala, na-ejikarị 16-25mm ígwè ọkpọkọ, mgbe ụfọdụ na-achọ 19-25mm aluminom ọkpọkọ, inogide na siri ike.
Ihe No.LSA 2005
Nha:dị ka n'okpuru format
Ihe:600D oxford + ígwè ọkpọkọ ma ọ bụ aluminom ọkpọkọ
MOQ:200-300 PC na ụkpụrụ dịnụ
Desktọpụ usoro ịkụ azụ na oche
Azụ usoro oche na oche, kere n'èzí eke gburugburu ebe obibi, na-ejikarị 14-25mm ígwè / aluminum ọkpọkọ, mgbe ụfọdụ na-achọ, inogide na siri ike, shei ákwà ma ọ bụrụ na mkpa na-emekarị 600D oxford mgbochi esemokwu na mmiri na-eguzogide ọgwụ.
Ihe No.LSA 2006
Ihe:14-25mm ígwè ọkpọkọ ma ọ bụ aluminum ọkpọkọ
MOQ:200-300 set na ụkpụrụ dị
Oche na oche apịaji n'èzí
Oche na oche apịaji, nke emebere maka gburugburu ebe obibi dị n'èzí, na-ejikarị 14-25mm ígwè / aluminom ọkpọkọ + 600D oxford akwa - eyi na-eguzogide, mmiri na-eguzogide ma na-adịgide adịgide na okike.
Ihe No.LSA 2007
Ihe:14-25mm ígwè ọkpọkọ ma ọ bụ aluminum ọkpọkọ + 600D shei ákwà
N'èzí apịaji oche OEM
Oche ndị apịaji, nhazi siri ike na ụkpụrụ dị mma, na-abụkarị 14-25mm ígwè / aluminom ọkpọkọ + 600D oxford ákwà - eyi na-eguzogide, mmiri na-eguzogide ma na-adịgide adịgide.Na-ebu ngwa ngwa na-eme ihe omume ịkụ azụ / ịchụ nta / njem, na-ebukọ nke ọma, na-ebu ya nke ọma.
Ihe No.LSA 2008
Oche ndị apịaji azụ azụ̀ Europe
Azụ apịaji oche, siri ike na nnukwu ikike imewe na ezi ụkpụrụ, na-emekarị 22-25mm ígwè / aluminum pipe + 600D oxford ákwà - eyi na-eguzogide, mmiri na-eguzogide ọgwụ na inogide.Na-ebukọta nke ọma na iburu n'èzí, gburugburu 6-8 KGS kwa ibe.
Ihe No.LSA 2009
Ihe:22-25mm ígwè ọkpọkọ ma ọ bụ aluminum ọkpọkọ + 600D shei ákwà
Ntụrụndụ apịaji oche
Ntụrụndụ apịaji oche, siri imewe na ezi ụkpụrụ, na-emekarị 14-22mm ígwè ọkpọkọ + 600D oxford ákwà - eyi na-eguzogide, mmiri na-eguzogide na inogide.Na-ebukọta nke ọma n'ime obere akpa, buru ya n'èzí nke ọma.
Ihe No.LSA 2010
Ihe:14-22mm ígwè ọkpọkọ + 600D oxford akwa
Agba:Camouflage, ma ọ bụ dị ka ahaziri.